All Areas AhloneBahanBotataungDagonInseinKamayutKyauk MyaungKyauktadaMayangoneMingalar Taung NyutNorth DagonPabedanPazundaungSanchaungShwe Gon TaingSouth OkkalapaTamweThingangyunYankin
All Categories Aesthetic ClinicBeauty SalonDental BeautyNail SalonPopular ShopsPromotionSpaUncategorized
When beauty advertisements make promises that certain product can make consumers look younger. Beauty advertising often has little to do with the product. The product is often dwarfed byabeautiful woman's image.
King City Gents & Ladies Hair Salon
Nat Ma De Beauty & Nail Art
J salon professional hair&make up
Thai Yai Beauty Spa – Wai Za Yan Tar Road
ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့ အသားအရေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသင့်လဲ
•ချွေးပေါက်ကင်းပြီး ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ •ဘာလဲဆိုတော့ မျက်နှာအသားအရေ ကျန်းမာဖို့အတွက် Toner သုံးပေးဖို့ပါ။ •လူတော်တော်များများက မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့ အခါတိုင်း အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ Cream တစ်ခုခု လိမ်းပါတယ်။ပြီးမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မိတ်ကပ်၊သနပ်ခါး စသည်တို့ကို လိမ်းကြတာ များပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး…
Vitamin E Moistruizing Cream
•Vitamin E Moistruizing Cream နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေကလည်း အံ့မခန်းဘဲနော်။အသုံးမပြုတဲ့အခါမှာ မျက်နှာအသားအရေတွေက အိုမင်းလာတာနဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲလာမှာအမှန်ပါ။ •အိုမင်းလာတဲ့အခါ… •-ပက်ကြားအက်လာမယ့် အသားအရေ •-နဖူး အရေးကြောင်း •-မျက်ကွင်းညို •-တင်းတိတ် စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။Vitamin E ပုံမှန် သုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့…
•အသားအရေကို Toner သုံးပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်ခုမက အများကြီးရှိပါတယ်။ •Toner ကိုပုံမှန် သုံးပေးတဲ့အခါ ခံစားရမယ့် အကျိုးရလဒ်တွေကတော့… •-ချွေးပေါက်တွေ ကျဉ်းလာမယ်။ •-အသားအရေရဲ့ PH ပမာဏကို ထိန်းညှိ့ပေးနိုင်မယ်။ •-အသားအရေကို အလွှာ တစ်ထပ်အနေနဲ့ ကာကွယ်ပေးတယ်။ •-အစိုဓာတ် ကို ထိန်းပေးနိုင်တယ်။ •-အသားအရေကို…
TO COLLABORATE WITH US BUSINESS OWNER